Fanohanana: ny kajy, ny fandoavam-bola - ny fomba Fanao - Ny mpahay lalàna ao Frantsa online!
Ny mpahay lalàna ao Frantsa online!
Fanohanana: ny kajy, ny fandoavam-bola - ny fomba Fanao
Alimony dia ny fitambaran'ny vola aloa amin'ny alalan'ny olona iray hafa amin'ny fanatanterahana ny fikojakojana ny adidyAo izany, tsy mitovy amin'ny ny compensatory vola izay mikatsaka mba hanonerana ny mifangarika amin'ny ambaratonga velona ny mpivady, vokatry ny fisaraham-panambadiana.
Ny fisotroan-dronono ny sakafo dia ny adidy ny ray aman-dreniny foana ny ankizy, izany hoe, ny ilainy.
Rehefa ny fianakaviana mipetraka miaraka, ity fanohanana ity dia tsy misy. Amin'ny tranga izay ny iray amin'ny mpivady tsy mety mandray anjara amin'ny ara-dalàna fandaniana ao an-tokantrano, ny hafa mety mampihatra ny mpitsara iray mba hanerena azy ireo handray anjara ara-bola ny fandaniana mifandraika amin'ny fikolokoloana ny ankizy. Mifanohitra amin'izany indray, ao ny raharaha ny fisarahan'ny ray aman-dreny, alimony mahita ny antony. Izany no tena noho ny ankizy, fa ny vady afaka mandray soa nandritra ny fisaraham-panambadiana fitsarana. Ny habetsahan'ny alimony dia raikitra conventionally eo amin'ny antoko (anisan'izany ny raharaha fisaraham-panambadiana amin'ny fiaraha-mientana ifampizarana fanekena), na amin'ny ny mpitsara. Ny mpitsara dia ity raharaha tafiditra ao ny tsirairay loharanon-karena ny tompon-trosa sy ny mpitrosa.
Mety ihany koa ny fiheverana izay manondro ny INSEE (national Institute of antontan'isa) mikasika ny vidim-piainana.
Azo havaozina amin'ny fotoana rehetra noho ny fangatahan'ny ny tombontsoa ny fisotroan-dronono na ny olona izay mandoa vola, raha toa ka misy ny fanovana ny toe-draharaha any indray ny ex-ny mpivady na ny fivoaran'ny ny zavatra ilain'ny ankizy.
Ao ny raharaha ny fanambadiana indray, na ny fanaovana tokantrano maso ny mpandray: alimony karama ny taloha vady) sy ny ankizy tsy ampy taona dia ny momba ny deduction avy taxable fidiram-bola: Misy fomba isan-karazany mba hanerena ny taloha vady mba handoa fanohanana ny ankizy:Ny saisiesIl dia maro endrika fahan'ny: Tsy maintsy mampihatra ny mpitsaran ny faty, ary avy eo dia ny bailiff noho ny fakana an-keriny-loka. Ny torohevitra ahafahanao mandray soa avy amin'ny fandoavam-bola rehetra ny trosa ny fisotroan-dronono hatramin'ny dimy taona.
Lalana ity dia tsaratsara kokoa raha misy te-ho sitrana tsy voaloa vola mihoatra ny enim-bolana, izay mivantana fandoavam-bola tsy mahomby. Ny fandoavam-bola directUn antoko fahatelo, (by ohatra amin'ny banky na ny mpampiasa ny taloha vady) dia handoa mivantana ny vola fisotroan-dronono ny toeran ny defaulting mpitrosa. Tsy maintsy manana fe-potoana farany, fara fahakeliny, dia efa tsy nandray karama ny daty raikitra. Izany dia alefa any amin'ny bailiff, izay dia tsy maintsy manaiky ny fitsarana ny fanamafisana ny fanohanana ny ankizy sy ny ilaina rehetra momba ny mpitrosa.
Ny vola lany amin'ny fomba izany dia tokony ho entina avy amin'ny mpitrosa.
Izany dia mamela anao mba handray ny vola noho ny enim-bolana teo aloha ny fampiharana. Isika tsy afaka mandeha any an-dafin'ny Izany no fomba mahomby ihany raha toa ka manana ny adiresy ny mpitrosa fa manana marin-toerana ny fidiram-bola.
Ny vahoaka fanarenana Ny fisotroan-dronono dia nilaza ny kaonty ny Ankapobeny, tale jeneralin'ny-Bahoaka ny fitantanam-Bola (DGFiP) toy ny hetra. Izany dia tsy maintsy ho efa niezaka tsy fahombiazana iray ny teo aloha ny fomba, izay midika fa tsy mandray vola vola mey farany tena ela, ary, mazava ho azy, mamorona ny toe-javatra sarotra ho an'ny tompon-trosa. Izany no fomba mahomby indrindra mba hahazoana ny fandoavam-bola ny enin-tsy noho ny antony sy ny fepetra mba ho tonga. Izany fomba fanao izany dia maimaim-poana Izany dia alefa any amin'ny mpampanoa lalàna ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ny domicile ny tompon-trosa. Izany dia ilaina mba handefa ny voasoratra amin'ny taratasy fampahafantarana ny fandraisana, ary ahitana: ny Tombontsoa azo avy amin'ny Fampiasana ny vola FamilialesLes vola ho an'ny fianakaviana Tamby (CAF) manana ny asa fanompoana mba hanampy ny ray aman-dreny noho ny fampahiratana amin'ny fikolokoloana vola miavaka ho an'ny mihoatra ny roa volana. Ny ray aman-dreny dia afaka mandray ny vola fanampiana ny fianakaviana fanohanana toy ny mialoha momba ny fisotroan-dronono tsy voaloa. Ny fandoavam-bola izany vola fanampiana dia tonga dia hiteraka ny fametrahana ny fanarenana ny asa fanompoana. Ny FCA manana zo hanomboka na hanohy ny asa na nanohitra ny(s) ray aman-dreny(s) default(s) fa ny refund ny vola fanampiana fanohanan'ny fianakaviana mandray karama. Ny fepetra takiana ho an'ny milaza ny tombontsoan'ny izany fanomezana dia ny manaraka izao: raha ny ampahany fandoavam-bola, dia hisy karama ny ho samihafa ny vola fanampiana hamenoana ny vola raha ny marina dia noho. Ny ray aman-dreny izay tsy mitoka-monina dia tsy manan-jo ny fianakaviany fidiram-bola fanohanana fa mety handray soa avy amin'ny fanampiana ny famoriam-bola ny asa fanompoana ho an'ny ankizy fanohanana tsy mandray karama (miakatra any amin'ny ambony indrindra ny roa taona) nanaiky ny ankizy tsy ampy taona. Izany no ilaina fa efa nanolo-tena manokana ny mizara ny vola ho fisotroan-dronono sy ireo fihetsika tsy mahomby. Ny fianakaviana Soa Vola mety koa ho miandraikitra ny fanarenana ny fikojakojana ny vady, aloha-vady sy ny hafa ny zanaky ny mpitrosa, ao anatin'izany ny vola noho ny fanajana ny compensatory fandoavam-bola na anjara, amin'ny faran'ny famatsiana ara-bola.
Mpisolovava ao amin'ny fitsarana - Master Celine ATIK-ARIANE, Mpisolovava ao amin'ny fitsarana
Pengiraan Norma Vektor Perangkat Online
© 2021 Ny mpahay lalàna ao Frantsa online!